विनाको बारेमा के खबर आयो ? फेसवुकमा पनि यस्तो लेखेकी रहिछन् (भिडियो हेर्नुस्) – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ २५, २०७८ समय: १५:४५:३७
काठमाडौ । विनाले फेसवुकमा केही दिन देखि निकै मार्मीक कुरा शेयर गरिरहेकी थिइन् । उनकी साथीले पनि तिमीलाई के भयो भनेर सोधिन ? तर उनले आफुलाई केही भएको छैन भनेर जवाफ दिइन् । साथी भन्छिन् त्यसलाई त्यती ठूलो समस्या परेको कुरा पहिले नै थाहा भएको भए हामी केही गर्न सक्थ्यौं । उसले हामीलाई केही भनिन ।
यसैबीच विहिवार विनाको बारेमा एउटा खबर आयो । जसले परिवारका सदस्यलाई निकै चिन्तित बनायो । नवलपुर गैंडाकोट नगरपालिका झपर्दीकी वीना हराएको पनि ११ दिन वितेको छ । तर उनी अहिले सम्म फेला परेकी छैनन् । चितवनकै सुजिताको घटनाको वास्तविकता नखुल्दै विना वेपत्ता भएको समाचार वाहिरिएको हो । उनलाई प्रेमीले घरवाटै वाइकमा लिएर गएका थिए ।
गैंडाकोटकी विनालाई असार १४ गते साढे चार बजे उनकै प्रेमीले वाइकमा लिएका गएका थिए । २१ वर्षीया विना गैंडाकोटको जनक कलेजमा बिबिएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिइन्।
विनाका बुवा जयश्वरले विना र प्रवेशको प्रेम सम्बन्ध रहेको कुरा प्रहरीसमक्ष पनि बताएका छन्। प्रवेशले पनि प्रवेश सामु त्यो कुरा स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । विनाले प्रवेशकोे अर्की केटीसँग सम्बन्ध रहेकोे चाल पाएपछि कुरा गर्न घरमा बोलाएकी थिइन्। अर्की युवतीको घर नजिकै तीनै जनाको कुराकानी भएको कुरा प्रवेशले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई दिएकोे बयानमा बताएका छन्।